कुन उमेरमा, कुन समयमा महिलालाई बढी ‘यौ’,न चाहाना हुन्छ ? – Jagaran Nepal
कुन उमेरमा, कुन समयमा महिलालाई बढी ‘यौ’,न चाहाना हुन्छ ?
हामीमध्ये धेरैलाई से८ क्स गर्ने समय कति बेला हो रु कतिबेला पुरुष महिलाले से८ क्स गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा थाहा छैन् रु अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशनको अनुसन्धानले पुरुष र महिलाको से८ क्स गर्ने चाहना बढ्ने समय पत्ता लगाएको छ । जसअनुसार पुरूषलाई विहानको समयमा से८ क्स गर्ने चाहना बढी हुन्छ । तर, से८ क्सका लागि महिलाहरु मध्यरातमा रोमाण्टिक मुडमा हुन्छन् ।
अध्ययन अनुसार यो सबै से८ क्स हार्मोन्सका कारणले हुने गर्दछ । रातमा महिलाहरु जब से८ क्सका लागि रोमाण्टिक मुडमा हुन्छन् तब पुरुषहरु या त सुतिसक्छन्, या से८ क्समा त्यती चाहना हुँदैन् । जति हुनुपर्ने हो । यस्तै समस्या विहान महिलालाई हुन्छ । त्यती बेला पुरुष से८ क्सका लागि बढी रोमाण्टिक मुडमा हुन्छ । जबकि त्यो बेला महिलालाई से८ क्सको इच्छा हुँदैन्।
अध्ययनले बताएअनुसार वेलुका ६ बजेपछि पुरुषमा टेस्टेस्टेरोन को मात्रा कम हुँदै जान्छ । जबकि त्यो बेला महिलाहरुमा हार्मोन्स बढ्न सुरु हुन्छ । वेलुका सुरु भएपछि महिलाहरुमा ४० प्रतिशत भन्दा बढी चाहना बढ्छ ।अफिसमा काम गर्ने पुरुषहरुमा त झन टेन्सन का कारणले टेस्टेस्टेरोन को मात्रा झनै घट्छ । पुरुष महिलाको तालमेल मिलाउन विराएर जोडीले एक दिन महिलाको चाहना भएको समय र अर्को पुरुषको चाहना भएको समयमा सन्तुष्टि लिन सक्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।